Use left menu to specify different staring point for distance measuring!Current Starting point:Polkovnik Dyakovo (Village of Polkovnik Dyakovo, Municipality Krushari, District Dobrich, North-Eastern Bulgaria)Distance to: (Enter and click Search for filtering the result or leave empty for all available places)Current page: 19/110.                    >> administrative regions of functional type 5901. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Vodno (village, NC, province Silistra): 49.423 km (map)902. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Vokil (village, NC, province Silistra): 57.926 km (map)903. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Voynika (village, SE, province Yambol): 180.977 km (map)904. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Voynyagovo (village, SC, province Plovdiv): 284.171 km (map)905. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Voyvodinovo (village, SC, province Plovdiv): 304.027 km (map)906. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Voyvodovo (village, SC, province Haskovo): 287.355 km (map)907. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Vrani kon (village, NE, province Turgovishte): 135.975 km (map)908. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yablanovo (village, SE, province Sliven): 138.597 km (map)909. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yabulchevo (village, SE, province Bourgas): 126.231 km (map)910. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yabulkovo (village, SC, province Haskovo): 274.466 km (map)911. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yahinovo (village, SW, province Kyustendil): 414.62 km (map)912. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yakimovo (village, NW, province Montana): 355.334 km (map)913. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yana (village, SW, province Sofia-city): 363.058 km (map)914. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yarebitsa (village, NC, province Silistra): 62.785 km (map)915. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yasenkovo (village, NE, province Shoumen): 83.334 km (map)916. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yasenovets (village, NC, province Razgrad): 98.252 km (map)917. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yavorets (village, NC, province Gabrovo): 233.031 km (map)918. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yonkovo (village, NC, province Razgrad): 88.966 km (map)919. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yunatsite (village, SC, province Pazardjik): 337.541 km (map)920. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yuper (village, NC, province Razgrad): 111.082 km (map)921. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Yurukovo (village, SW, province Blagoevgrad): 398.604 km (map)922. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zafirovo (village, NC, province Silistra): 77.886 km (map)923. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zagore (village, SE, province Stara Zagora): 239.419 km (map)924. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zamfir (village, NW, province Montana): 363.714 km (map)925. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zamfirovo (village, NW, province Montana): 370.828 km (map)926. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zaychar (village, SE, province Bourgas): 128.679 km (map)927. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zelena morava (village, NE, province Turgovishte): 143.936 km (map)928. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zetyovo (village, SE, province Stara Zagora): 5599.02 km (map)929. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zgorigrad (village, NW, province Vratsa): 351.837 km (map)930. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zimnitsa (village, SE, province Yambol): 170.363 km (map)931. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zlatia (village, NW, province Montana): 336.511 km (map)932. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zlatitrap (village, SC, province Plovdiv): 320.554 km (map)933. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zlatna Panega (village, NW, province Lovech): 305.301 km (map)934. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zmeitsa (village, SC, province Smolyan): 379.385 km (map)935. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zurnevo (village, NE, province Dobrich): 43.461 km (map)936. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zverino (village, NW, province Vratsa): 352.038 km (map)937. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Zvunichevo (village, SC, province Pazardjik): 341.789 km (map)administrative regions of functional type 6938. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Akandjievo (village, SC, province Pazardjik): 5599.02 km (map)939. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Alamovtsi (village, SC, province Smolyan): 354.99 km (map)940. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Alekovo (village, NC, province Silistra): 34.72 km (map)941. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Altimir (village, NW, province Vratsa): 320.768 km (map)942. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Angel voyvoda (village, SC, province Haskovo): 303.02 km (map)943. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Antimovo (village, NW, province Vidin): 388.036 km (map)944. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Aprilovo (village, NE, province Turgovishte): 138.065 km (map)945. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Arda (village, SC, province Smolyan): 369.471 km (map)946. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Asenovets (village, SE, province Sliven): 208.585 km (map)947. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Asenovo (village, NC, province Veliko Turnovo): 154.77 km (map)948. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Asparuhovo (village, NE, province Varna): 76.369 km (map)949. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Atia (village, SE, province Bourgas): 156.503 km (map)950. Aerial distance from Polkovnik Dyakovo to Ayrovo (village, SC, province Kardjali): 317.111 km (map)                    >> Other resources for distances of BulgariaRoad distances in Bulgaria
<a href="http://www.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Krushari/Polkovnik_Dyakovo/distances.aspx?pg=19" target="_blank">Distances from Village of Polkovnik Dyakovo</a>
Properties: SunÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¾ evbregProperties: Anevo SpotProperties: SunsetBeachLozenecProperties: alexanda stamboliyski 32Properties: Sunrise VillasProperties: BULGARÄ°SATNProperties: BULGARÐ†Properties: BULGARÐ°APlaces: ÑƒÑ Ðµ Ð’ÑŠÑ€ÑˆÐµÑ†Schools: пловдив захарна фабрикаSchools: плевен монтанамSchools: пловдив мездраProperties: alem makProperties: Sunrise Club sunny beachProperties: Sunny SouthSchools: zelenika kitenProperties: alex hause errors phSchools: козаровецSchools: zelenichePlaces: исперих